China Mkpọrọ akụrụngwa akụrụngwa na ndị nrụpụta | JUMP
Mkpọ mkpọ bụ ụdị nke dị njikere iri ngwaahịa ndị sitere na azụ ọhụrụ ma ọ bụ nke oyi na-acha site na nhazi, ịmị mkpụrụ osisi, oge nri, akara na ịgba ụlọ. Ngwurugwu nke azu azu tinyere akụrụngwa nhazi akụrụngwa, ngwa ọrụ, ngwa eji ejiji, akụrụngwa canning
Akara equ. Dika usoro nhazi di iche iche, azu azu nwere ike kee ya na braised, eggplant juice, eghe, steamed, smoked, oil immersed, water soaked and so. Nkịtị, mmiri mmiri, mmiri mmiri, mmiri mmiri, salmọn, gụnyere salmọn.
Ndụ nke azụ mkpọ bụ ihe dị ka ọnwa 24, nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-eche na ọ bụ n'ihi ihe nchekwa. Ọ bụghị. Nri mkpọ bụ ụdị usoro nhazi nri dị mkpa, ya bụ, a na-etinye akụrụngwa n'ime akpa mechiri emechi na gas na-ekpochapu ma na-emeso ya ọkụ dị elu, nke nwere ike igbu ụdị microorganisms na nje bacteria niile, mebie ọrụ nke enzymes, gbochie mpụga mmetọ na oxygen ịbanye, iji mee ka nri kwụsie ike ma rie ya ogologo oge. Ya mere, ọtụtụ azụ azụ adịghị agbakwunye ihe nchekwa, ndị ahịa nwere ike ijide n'aka na ha ga-eri nri.
Na mgbakwunye na njikwa siri ike nke nhọrọ akụrụngwa, nhazi na usoro ịga ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ nri mkpọ kwesịrị ịrụ ọrụ dị mma na disinfection na sterịization ọrụ n'ime ụlọ nchekwa ihe akụrụngwa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ogbako mkpọ iji mee ka ha nwee mkpọ ma kaa akara na a gburugburu ebe obibi N'iburu n'uche nkwanye nsị dị elu nke nri mkpọ, ọ dị mma ịnabata nicoler ike disinfection na sterilization technology n'oge na-adịghị anya, ya bụ, ịga n'ihu nwoke na nwoke ịga ụlọ ọgwụ na ọnụnọ nke ndị mmadụ, nke na-adịghị emerụ ahụ mmadụ, ma na-eme maka ntụpọ nke mmadụ-kọmputa asynchrony nke ozone, ultraviolet radieshon na ịgba ọgwụ ọjọọ n'oge gara aga. Ọ na-eji ụlọ igwe ihe nicoler kachasị ọhụrụ etolite ogige electrostatic plasma bidirectional atọ. Site na ịwepụta ọtụtụ plasma, ọ nwere ike igbu kpamkpam ebu na nje na ikuku na ndị ọrụ nke ha. Mgbe ahụ, ọ na - agwakọta ihe ndị mejupụtara dịka carbon na - arụ ọrụ nke na - arụ ọrụ maka ọgwụ mgbochi na nzacha nke abụọ. Mgbe ọgwụgwọ gasịrị, nnukwu ikuku dị ọcha na-efegharị ma na-aga ngwa ngwa, na-edebe gburugburu ebe a na-achịkwa ya na ọkọlọtọ "enweghị ntụpọ na ntụ ntụ" Ọ nwere ike ịghọta mmetụta mmekọrịta nke "ịrụ ọrụ na disinfecting n'otu oge", ma chịkwaa mmetọ nke abụọ. nke microorganism na usoro nke mmepụta nri na ndochi. N'oge na-adịbeghị anya, ejirila nke nta nke nta jiri ya mee ihe dị jụụ, nkwakọ ngwaahịa na ijuputa ụlọ ọrụ nri. Na mgbakwunye na ijigide gburugburu ebe obibi nke mmepụta na ogbako canning, ihicha akụrụngwa bụkwa usoro dị mkpa na usoro nke canning. Nhicha obughi nani na ewepu ala na unyi n’elu akuku, kamakwa belata microorganisms di n’elu. Ya mere, mmiri nhicha ahụ ga-adị ọcha ma dị ọcha.
Nke gara aga: Onwe ya mepụtara biya biya ọhụrụ
Osote: Ngwa eji esi nri